Gingival Recession (သွားဖုံးလန်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Gingival Recession (သွားဖုံးလန်ခြင်း)
Gingival Recession (သွားဖုံးလန်ခြင်း) ကဘာလဲ။
သွားဖုံးလန်ခြင်းဆိုသည်မှာ သွားဖုံးများ သွားမျက်နှာပြင်မှ နောက်သို့လန်ဆွဲသွားပြီး သွားမြစ်များပေါ်လာသော အခြေအနေကို ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် သွားဖုံးရောဂါ (Periodontal) တစ်မျိုးဖြစ်၏။ ခံတွင်းကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာဖြစ်ပြီး သွားများဆုံးရှုံးရနိုင်သည်။
တစ်ရှူးဆုံးရှုံးမှု အပြင်းအထန်ပေါ် မူတည်ကာ ကုသနိုင်သော နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိ၏။ စောစောသိ စောစောကုလျှင် အခြေအနေ ပိုကောင်းလေလေဖြစ်သည်။
Gingival Recession (သွားဖုံးလန်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
သွားဖုံးလန်ခြင်းသည် အသ်က ၄၀ ကျော်များတွင် အဖြစ်များသော်လည်း ဆယ်ကျော်သက် သို့မဟုတ် ၁၀ နှစ်ဝန်ကျင်းမှ စဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။
Gingival Recession (သွားဖုံးလန်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
သွားဖုံးလန်ခြင်း ၏ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာများမှာ-
သွားတိုက် သွားကြားထိုးပြီးနောက် သွေးထွက်ခြင်း
Gingival Recession (သွားဖုံးလန်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သွားဖုံးလန်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါသည်။
သွားဖုံးနှင့် သွားများနေသားတကျ ဖြစ်နေစေရန် ထိန်းပေးသော အရိုးတို့ကို ဖျက်စီးနိုင်သည့် ဘက်တီးရီးယီးပိုများ ကူးစက်နိုင်သည်။ သွားဖုံးရောဂါများသည် သွားဖုံးလန်ခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်းပင်ဖြစ်သည်။
တစ်ချို့လူများသည် သွားဖုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများ၏။ အချက်အလက်အားဖြင့် လေ့မှုများတွင် ၃၀ % သောလူများသည် သွားကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်မှုရှိရှိ မရှိရှိ သွားဖုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည်။
သွားများကို နည်းလမ်းမမှန်ပဲတိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြမ်းတမ်းစွာတိုက်ခြင်း ပြုလုပ်လျှင် သွားကြွေလွှာများ ပြုန်းသွားနိုင်ပြီး သွားဖုံးလန်စေနိုင်ပါသည်။
သွားမှန်မှန်မတိုက်ခြင်း၊ သွားကြားမထိုးခြင်းနှင့် ဘက်တီးရီးယားသေဆေးများဖြင့် ပါးစပ်သေချာမဆေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပါက အကြွင်းအကျန်များမှ သွားချိုးများကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး သွားအထူးကုများမှသာ ဖယ်ရှားနိုင်သောအရာများဖြစ်ပါသည်။ သွားချိုးများသည် သွားဖုံးလန်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
အမျိုးသမီးများဘဝတစ်လျှောက်လုံး မဟော်မုန်း အတက်အကျများ ဥပမာ အပျိုဖော်ဝင်စ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ သွေးဆုံးခြင်း စသည်တို့တွင် သွားဖုံးများကို အထိမခံဖြစ်စေနိုင်ပြီး သွားဖုံးလန်ခြင်းကို ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Gingival Recession (သွားဖုံးလန်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သွားဖုံးလန်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
အာခြောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် ဆေးများသည်လည်း သွားဖုံးလန်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အာခြောက်လျှင် ရှိသင့်သည့် တံတွေးပမာဏ မရှိတတ်ပါ။ တံတွေမလုံလောက်လျှင် သင့်ပါးစပ်မှ တစ်ရှူးများသည် ဘက်တီးရီးယားပိုး ကူးခြင်းနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကို ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Gingival Recession (သွားဖုံးလန်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သွားဖုံးလန်ခြင်းနှင့် တခြားသောသွားဖုံးရောဂါများကို သွားဆရာဝန်မှ ရောဂါအမည်တပ်မည်ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်ကြည့်ရှု့ခြင်းဖြစ် ရောဂါအခြေအနေကို သိနိုင်ပါသည်။ သွားဖုံးခွက်များကိုတိုင်းတာရန် Probe တစ်ခုကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Probe သည် သေးငယ်သော မနာကျင်စေသည့် ပေတံသုံး တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ National Institute of Dental and Craniofacial Research အရ သာမှန် သွားဖုံးခွက်အရွယ်အစားသည် ၁-၃ မီလီမီတာသာ ရှိပါသည်။ ထိုထက်ကြီးပါက သွားဖုံးရောဂါ လက္ခဏာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
သွားဖုံးလန်ခြင်းကိုသိသည်နှင့် သွားဖုံးအထူးကုဆီသို့ လွှဲကိုလွှဲရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအထူးကုမျိုးသည် သွားများနှင့် သွားဖုံးတစ်ရှူးများအား ကောင်းလာစေရန် ကုသရမည့်အစီအစဉ်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့် သွားဖုံးများတွင် ပိုးကူးစက်မှုကို တွေ့ရပါက ပဋိဇီဝဆေးများကို ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Gingival Recession (သွားဖုံးလန်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သွားဖုံးလန်ခြင်း အပျော့စားများအား လန်နေသည့်နေရာတွင် သွားဆရာဝန်မှ အတွင်းထိသန့်ရှင်းပေးခြင်းဖြင့် ကုသနိုင်ပါသည်။ အတွင်းထိသန့်ရှင်းရာတွင် (tooth scaling နှင့် root planning ဟုလဲခေါ်သည်) သွားဖုံးလိုင်းအောက်ရှိ သွားချိုးများ အချပ်ပြားများကို ဂရုတစိုက်ဖယ်ရှာကာ ပေါ်နေသည့် အမြစ်နေရာအား ဘက်တီးရီးယားများ တွယ်ကပ်မရစေရန် ချောမွတ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသည့် အန္တရာယ်များသော ဘက်တီးရီးယားများအတွက်မူ ပဋိဇီဝဆေးများကို သောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
အရိုးခွက်များ တိုက်စားမှုသည် အတွင်းထိနက်နေသောကြောင့် သွားဖုံးလန်ခြင်းအား အတွင်းထိသန့်ရှင်းမရနိုင်လျှင် ပျက်စီးသွားသည်များကို ပြုပြင်ရန်အတွက် သွားဖုံးခွဲစိတ်မှုလုပ်ရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
အောက်ပါ ခွဲစိတ်မှုများကို သွားဖုံးလန်ရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။
ဒီခွဲစိတ်မှုတွင် သွားဆရာဝန် သို့ သွားအထူးကုမှ ထိခိုက်နေသည့် သွားဖုံးတစ်ရှူးများကို ပြန်စိပြီး အန္တရာယ်ပေးသည့် ဘက်တီးရီးယားများကို သွားဖုံးခွက်များအတွင်းမှ ဖယ်ရသည်။
ထို့နောက် သွားအမြစ်ဖုံးအောင် သွားဖုံးတစ်ရှူးများကို နေသားတကျထားခြင်းဖြင့် သွားဖုံးပေါက်များကို ပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အရွယ်အစားလျော့ခြင်းကို ပြုလုပ်ပါသည်။
သွားဖုံးလန်ခြင်းကြောင့်သွားများကိုထောက်ပံ့ပေးသော အရိုးပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပါက ပျက်သွားသောအရိုးများနှင့် တစ်ရှူးများ ပြန်ကောင်းအောင် regenetate လုပ်ဖို့ရာ လမ်းညွှန်ထားပါသည်။ Pocket depth reduction မှာကဲ့သို့ပင် သွားဆရာဝန်သည် သွားဖုံးတစ်ရှူးများကို ပြန်ဖုံးပြီး ဘက်တီးရီးယားများကို ဖယ်ရှားမည်ဖြစ်သည်။
ပြန်လည်သန်စွမ်းသော အရာများ ဥပမာ အမြှေးပါးများ၊ အစားထိုးတစ်ရှူးများ သို့မဟုတ် တစ်ရှူးလှုံစော်သည့်ပရိုတင်းများကို သုံးပေးပြီး ခန္ဓါကိုယ်မှ အရိုးနှင့် တစ်ရှူးများအား သဘဝအတိုင်း ပြန်လည်သန်စွမ်းစေမည်ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်သန်စွမ်းစေသည့်ပစ္စည်းများ ထည့်ပြီးလျှင် သွားဖုံးတစ်ရှူးများကို သွားမြစ်နှင့် သွားဖုံးအောင် ပြန်စေ့မည်ဖြစ်သည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက သွားဖုံးလန်ခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
သွားဖုံးလန်ခြင်းအား ကာကွယ်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးသည် သွားဆရာဝန်နှင့်ပြကာ မှန်မှန်သန့်ရှင်းခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများ ဘာမှမခံစားရလျှင်တောင်မှ သွားဆရာဝန်သည် သွားဖုံးရောဂါ၏ အစောပိုင်း လက္ခဏာများကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
စမတ်ကျသည့် ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို လိုက်စားခြင်းဖြင့် သွားဖုံးပြဿနာများကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်သွားကြားထိုးခြင်းနှင့် သွားတိုက်ခြင်းသည် ဘက်တီးရီးယားများ၊ စားကြွင်းစားကျန်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး ချပ်ပြားများနှင့် သွားချိုးများကိုတော့ သွားဆရာဝန်နှင့်မှ ဖယ်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သွားချိုးများသည် သွားဖုံးရောဂ်များနှင့် သွားဖုံးလန်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ထို့ကြောင့်ပင် တစ်နှစ်နှစ်ခါ သွားသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည် ထိုကဲ့သို့သော နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကို ကာကွယ်ရာတွင် အရေးပါခြင်းဖြစ်သည်။
Gingival recession. http://www.healthline.com/health/dental-oral-health-receding-gums#Complications5 . Accessed November 29, 2016.
Gingival recession. http://www.webmd.com/oral-health/guide/receding_gums_causes-treatments#2 .Accessed November 29, 2016.
Gingival recession. https://en.wikipedia.org/wiki/Gingival_recession . Accessed November 29, 2016.